ဗေဒင် – For Crush
ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ တစ်နှစ်စာဗေဒင် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတို့သည် ယခုနှစ်တွင်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး လုပ်ငန်းခွင်များအောင်မြင်လာလိမ့်မည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးသွားလာခြင်းများ ကြုံလာတတ်သည် ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း ကွန်ပျူတာနှင့် တီထွင် ပညာများ ဆောင်ရွက်ခြင်းကောင်း၏။ အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ခြင်း အလုပ်အသစ်များထူထောင်ခြင်း ကောင်း၏ ရေကြောင်း ခရီးသွားလာခြင်းများအထူးရှောင်ကြဉ်ရမည်။ အိမ်ခြံမြေကားတိုက်ခန်အပြောင်းအလဲများရှိမည် (14-4-2021) မှစ၍ (15-6-2021) အထိ အရာရာတွင် သတိနှင့် ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ လုပ်ငန်းကိစများအတွက် စနေတနင်္ဂနွေသားသမီးများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ …
2021ခုအတွက်စနေသားသမီးများ တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း စနေသားသမီးတို့သည် 2021 ခုနှစ်တွင်ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးအပြောင်းအလဲဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ မူလဇာတာအရ ကံကောင်းချိန်ကျရောက်နေတဲ့သူများက သူမတူအောင် တိုးတတ်သွားနိုင်ပြီး..မူလဇာတာအရလဲ ဒီနှစ်မှာကံညံ့နေသူဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဘဝပျက်လောက်သည်အထိ ကံဆိုးသွားတတ်ပါတယ်။ဒီနှစ် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ နေရာသစ်၊ ဝန်းကျင်သစ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ရ တတ်သည်။ သူတစ်ပါးအတွက် အကျိုးမပေးလို့ပစ်ထားတဲ့အလုပ်များမိမိကပြန်လည်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင် ခြင်း ကံကို ရ တတ်သည်။ သူများတွေကအရှုံးပေါ်လို့ ရောင်းချင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဝယ်ယူလုပ်ကိုင်တာမျိုးက မထင် မှတ်လောက်အောင် တိုးတတ်နိုင်ပါတယ်။ …
ကွားသိသမြှ / ဗေဒင်
ဒီနှစ်မှာ အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ မိမိကြိုးစားထားသမျှတွေကို ပြန်လည်ခံစားရမယ့်နှစ်ပါ။ မနှစ်ကအပင်ပန်းခံခဲ့တာတွေ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့တာတွေ၊ အနစ်နာခံကြိုးစားခဲ့တာတွေ ရှိကြတဲ့သူအတွက် ဒီနှစ်ဟာ ကောင်းကျိုးကို ပိုမိုဖြစ်ထွန်းစေပါ့မယ်။အလုပ်သစ်၊ဝန်းကျင်သစ်တွင် ကြိုးစားရသော အချိန်ကာလဖြစ်၍ ကြိုးစားသလောက် အခွင့် ထူးရရှိပါလိမ့်မယ်။ သွားလေရာ မျက်နှာပွင့်သော်လည်း ရန်သူများနေတတ်သည်။ တစ်ခုသိထားရမှာက မိသားစု အတွင်း ညီအကိုမောင်နှမများသူတွေ၊ ယောက်ဖ၊ယောင်းမတွေနဲ့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင် ကြရတဲ့သူတွေ အိမ်တွင်းရေး အပူရှိပါလိမ့်မယ်။ မိသားစုအတွင်းစိတ်သောကရောက်စရာ တွေကြုံနေရတတ် …
2021 ခုနှစ်တနင်္လာသားသမီးများ တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း တနင်္လာသားသမီးတို့သည် 2021ခုမှာအဘက်ဘက်က အဆင်ပြေကံကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက ရာထူးတိုးခြင်း၊နေရာကောင်းရခြင်းတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ငွေကြေးအစုလိုက်ဝင်တတ်ပါတယ်။ အကျိုးတူ အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ရလဒ်လဲကောင်းပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စိတ်အလောကြီး စွာ လုပ်ကိုင်ခြင်းများ ရှောင်ပါ။တစ်ခုဆိုးတာက မိမိထက် ဉာဏ်ရည်၊လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ညံ့သူနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ ငွေကြေးကိစ္စများ၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ အထည်အလိပ် ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ချီခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အပိုပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ရေး၊ …
မိမိ ဘာဖွားလဲဆိုတာလည်း သိနိုင်မယ်. ဗေဒင်ကိုလည်း မိမိကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်နိုင်မယ့်နည်း ၀ ခုကြွင်းလျှင် ဝ ခုကြွင်း တနင်္ဂနွေ ဖြစ်လျှင် ပုတိဖွား ဝ ခုကြွင်းတနင်္လာ ဖြစ်လျှင် သိုက်ဖွား ဝ ခုကြွင်းအင်္ဂါ ဖြစ်လျှင် မရဏဖွား ဝ ခုကြွင်းဗုဒ္ဓဟူး ဖြစ်လျှင်အဓိပတိဖွား ဝ ခုကြွင်းကြာသပတေး ဖြစ်လျှင် ရာဇဖွား ဝ ခုကြွင်းသောကြာ …
၂၀၂၁ခုနှစ်အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ၏(၁)နှစ်စာ ဟောစာတမ်းနှင့် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များ….
၂၀၂၁ခုနှစ်အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ၏(၁)နှစ်စာ ဟောစာတမ်းနှင့် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များ…. ၂၀၂၁ခုနှစ်အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ၏(၁)နှစ်စာ ဟောစာတမ်းနှင့် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များ ၂၀၂၁ခုနှစ်အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ၏(၁)နှစ်စာ ဟောစာတမ်းနှင့် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ယခုနှစ်ပိုင်းခြားထဲမှာ နာမည်ဂုဏ်သတင်း မကောင်းပြောသူအပုတ်ချလိုသူများတွေ့ရတတ်တယ်။ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့မိမိမှန်မှန် မှားမှား ထုတ်ဖော်မပြောဆိုသင့်တဲ့ အချိန်ပိုင်းခြားလဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိဘက်က ဘယ်လောက်ပဲမှန်မှန် ကံကြမ္မာကမိမိကို မျက်နှာသာမပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် လုပ်ငန်းကိစ္စများတွင်ထင်ထားသလို ဖြစ်မလာဘဲ မထင်မှတ်ထားတာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ပူပင်စရာစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာများ ကြုံတွေ့ရပြီးအရာရာလွဲမှားမှု့| မပြီးမပြတ်မှု့တွေ ကြုံတွေ့နေရပြီးအများနဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့အတွေးခေါ်ယူဆမှု့တွေဟာလွဲမှားစရာများ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်လို့ ဒီအချိန်မှာ သေသေခြာခြာ စဉ်းစားပြီးမှအစစအရာရာ လုပ်ကိုင်ပါ။ …
(၁၂) ကောင်ဗေဒင် အရမ်းမှန်တယ်နော်
(၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…1 (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…2 (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…3 (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…4 (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…5 (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…6 (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…7 (၁၂) ကောင်ဗေဒင် …
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း (၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း တစ်ပတ်တာအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ရမဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ ၊ ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာများ တွက်ချက် ဟောကြားပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း မိမိရဲ့ ကံကြမ္မာ အပြောင်းအလဲ အကောင်းအဆိုးအား အထူးတွက်ချက်ဟောကြားပေးသော ဟောစာတမ်းအားမှာယူလိုပါက Messenger …
အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်း ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်မယ်.. မန်မာ့ရိုးရာ မဟာဘုတ် ဗေဒင်ပညာမှအိမ်ထောင်ရေး အဟောများ အကုန်မမှန်ပါ လူ ၁၀၀ မှာ ၈၀% ဖြစ်ကြရတတ်တယ်လို့ ဆိုလိုရင်းသာဖြစ်ပါတယ် တွက်နည်း” မိမိ၏ မြန်မာမွေးခုနှစ်ကို ၇ ဖြင့် စား၍ အကြွင်း ၁ ရသော ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ပါက အကြွင်း ၁(ကျား)ဆိုသော အဟော မိန်းကလေးဆိုပါက အကြွင်း …
၂၀၂၀ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ (၁၄) ရကျနမှေ့(၂၀) ရကျနအေ့ထိ (၇)ရကျသားသမီး တဈပတျစာ ဟောစာတမျး
၂၀၂၀ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှ ၂၀ ရက်နေ့ အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေသားသမီးများဆွေမျိုးအပေါင်းအသင်းများနှင့် မကြာခဏ စကားများ အဆင်မပြေတာလေးတွေ အိုးသစ်အိမ်သစ်ဝင်ခြင်းများ လုပ်ငန်းသစ်များဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းများကြောင့်အထက်လူကြီးများရဲ့သဘောကျခြင်းယုံကြည်ခြင်းတွေခံနေရတတ်တယ်။ မြေကိစ္စအမွေကိစ္စတွေနဲ့ပက်သက်ပြီးစကားအခြေအတင်ပြောရတတ်တယ်။ကြာနေတတ်တယ်။အလှူကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာ ရက်ရွှေ့ဆိုင်းရတာမျိုးတွေလဲဖြစ်တတ်တယ်။ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ သင်တန်းတတ်ခြင်းများ အထူးအဆင့်မြင့်တာဝန်များထမ်းဆောင်ရခြင်းတွေကြုံတတ်ပါတယ်။အလုပ်တာဝန်ပိနေပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေလဲဖြစ်နေတတ်တယ်။ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အင်္ဂါနံနဲ့ပက်သက်တဲ့ဆန်ဆီဆေးဆား စက်စိန်လုပ်ငန်းများကံကောင်းလာလိမ့်မယ်။ငွေကြေးကိစ္စများ မျှော်မှန်းထားသလောက်တော့အဆင်မပြေဖြစ်နေတတ်တယ်။လုပ်ငန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်တတ်တယ်။ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ လူလွတ်များအိမ်ထောင်ကျတတ်ပြီးတော့အိမ်ထောင်သည်များမျက်နှာများနေတတ်တယ်။ဝမ်းကိုက်တာမျိုးကြုံတတ်ပါတယ်။ ကံကောင်းစေရန်သောက်တော်ရေ၅ခွက်လှူပါ။ကံကောင်းစေသော ဂဏန်း ၅ ၊၁ ဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္လာသားသမီးများဒီရက်ပိုင်းမှာခရီးတိုလေးတွေသွားနေရတတ်တယ်။ပညာရေးကိစ္စများပညာသစ် …